Toriteny Alahady 10 jolay 2016 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 10 jolay 2016
« MPIARA MIASA AMIN ‘ANDRIAMANITRA NY MINO »
I Tantara 23, 1-5 ; Jaona 14, 12-14 ; II Kor 5,20 ; 6 : 1- 3
Raha ny eto Madagasikara no asian-teny dia samy milaza ho mino an’Andriamanitra avokoa na ny mivavaka na ny tsy mivavaka. Hoy Jesoa
” Izay mino ahy , ny asa ataoko no ataony koa ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria Izaho mankany amin’ny Ray ; ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny Anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka ; Raha mangataka zavatraamin’ny Anarako ianareo dia hataoko izany …. » Jao 14 : 12 – 14
Manasa anao hanaraka izay hafatra tian’ny Tompo ampitaina :
I-Manafatrafatra Jeso fa ny mino no manao ny asany
Iza no antsoina hoe mino ? : Ireo izay manaiky manao ny asan’Andriamanitra no atao hoe mino
Inona no asa ampanaovina ? : Mitaona sy mitantana ny olona hiditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fitoriana ny Filazantsara .
Inona no tanjon’ny asa ? : Mba hahazo tombony Andriamanitra amin’ny asa rehetra ampanaoviny.
Nomen’Andriamanitra ho antsika ny androm-pahavelomana, hery sy tanjaka, fahaizana amam-pahalalana , vola aman-karena, fotoana , talenta maro sns Avy amin’Andriamanitra ireny mba ho tantananatsika fa nampiasaintsika ho amin’ny asan’Andriamanitra tokoa ve izy ireny sa dia natao hahazoana fifaliana sy fahafinaretan’ny nofo sy ny saina fotsiny ?
Isao ny tombon’andro nomen’ Andriamanitra anao hatramin’ity anio ity. Nisy tombony afaka natolotra ho an’Andriamanitra ve nandritra izay fahavelomanao izay sa fantiantoka no hitany ?
Mazotoa manolo tena ho an’ny Tompo mba hanao asa bebe kokoa.
II – Miantoka ny ny fiainantsika ny Tompo
“Na inona na inona angatahinareo amin’ny Anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin’ny zanaka.
Tsiambaratelon’ny fahombiazana amin’ny fiainana ny fanaovana ny asan’Andriamanitra. Karakarain’ny tanan’Andriamanitra ny olona manao ny asany.
Nahoana ary no manao ny asan’Andriamanitra nefa tsy mahazo valim-bavaka ?
Miasa mba hanome tombony ho an’Andriamanitra ve aho sa tombony ho an’ny tenako ihany ? (tsy velona ho an’ny tenany ihany ny mino fa velona ho an’ny hafa ihany koa)
Sao dia misy efitra mampisaraka anao amin’Andriamanitra : mila msaraka amin’ny fahotana aho ka miverina amin’Andriamanitra “Ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitra (Isa 59)
Mila miady varotra amin’Andriamanitra , miorina tsara amin’ny finoana ary manana faharetana.
Efa vita soratra eo anatrehan’Andriamanitra avokoa ny anjara asan’ny olombelona tsirairay avy mandritra ny fahavelomany, anjarako sy anjaranao ny manapa- kevitra hisaraka amin’ny fahotana; hanolo –tena ho an’ny Tompo mba ho mpiara –miasa mahatoky ao Aminy; handray ny iraka ary hanatanteraka izany mba hisy tombony hatolotsika ho an’Andriamanitra.
Mihavàna amin’Andriamanitra; fa Jesoa Kristy Tompo no miady varotra ho anao eo an-tanana ankavanan’ny Ray ka hanome anao izay rehetra angatahinao amin’ny alalan’ny vavaka mba hankalazana an’Andriamanitra.
Voninahitra ho an’Andriamanitra
RATSIMANDISA Zo, Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 13 juillet 2016
Alahady 18 Novambra 2017 HAFATRA avy amin’ny Filohan’ny FJKM ho an’ny mpino FJKM Entanina ny mpino FJKM mba hanohana ny...
Soratra Masina, Toriteny	Lire la suite
TORITENY Alahady 11 Novambra 2017
TORITENY Alahady 11 Novambra 2017 “Miandry ny Tompo ny vavolombelona mino” Mika 7 : 7 - 10 / Raha misy ny zava –miseho amin’ny...
TORITENY Alahady 06 Novambra 2017
TORITENY Alahady 06 Novambra 2017 “Miandry y Tompo ny vavolombelona mino” Salamo 33 : 18 – 22 / Lioka 2: 36-38 / Romana 8 :...
TORITENY Alahady 23 Oktobra 2017
TORITENY Alahady 23 Oktobra 2017 “Mahery vavaka ny vavolombelona marina” II Mpanjaka 4 : 32 – 37 / Marka 11 : 20 – 24 / Kolosiana...
TORITENY Alahady 15 Oktobra 2017
TORITENY Alahady 15 Oktobra 2017 “Mahery vavaka ny vavolombelona marina” Salamo 65 : 1 – 8 / Lioka 18 : 1-8 / Asa 9 : 36 -...